UZuma ukhuza umbango wamathenda | IOL Isolezwe
UZuma ukhuza umbango wamathenda
Isolezwe / 6 July 2012, 10:23am / CELANI SIKHAKHANE
UNGQONGQOSHE wezeMisebenzi kuleli uNkk Mildred Olifant obehola ithimba lakhe phakathi kwalo okunguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma noNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize kuvulwa ingqungquthela yokubhunga ngemisebenzi eRichards Bay izolo. Isithombe: ZANDILE SHANGE
UMENGAMELI wezwe uMnuz Jacob Zuma uphonsele inselelo osomabhizinisi baKwaZulu-Natal ekutheni bayeke ukubanga amathenda kodwa abasebenzise amachweba olwandle lwesifundazwe ukuziqalela amabhizinisi azodala amathuba emisebenzi.
Ukusho lokhu ekhuluma engqungqutheleni yezinsuku ezimbili yokubhunga ngemisebenzi ehlelwe uMnyango wezaBasebenzi kuleli ezophothulwa namhlanje eRichards Bay.
Uthe lesi sifundazwe sinamachweba amabili amakhulu anamandla emnothweni wezwe ne-Afrika yonkana kodwa osomabhizinisi bakhona abakaboni ukuthi kufanele bawasebenzise nabo bayeke ukubheka amathenda kuphela.
“Empeleni osomabhizinisi bakulesi sifundazwe kufanele engabe basebenzisa ichweba laseRichards Bay naseThekwini ekutheni babe nemikhumbi ehamba phakathi kwala madolobha ethutha abantu okungaba abavakashi nomphakathi kodwa bona abakuboni lokho ukuthi bahlezi phezu komnotho kunalokho bonke babheke amathenda lawa abawabangayo,” kusho uZuma.
Uthe kunezindawo ezingenalo ulwandle kodwa ezisebenzisa imifula emikhulu ezinayo ukufukula umnotho wazo nokuqhakambisa ezokuvakasha okuyinto okufanele osomabhizinisi baseKZN bayenze njengoba la machweba ehlomulisa nezwe izigidi zamarandi .
Ezinkulumeni ebezenziwa kule ngqungquthela kuvele kwacaca ukuthi izinga labantu abangasebenzi ikakhulukazi abasha liphezulu njengoba kuvele ukuthi iKwaZulu-Natal isahamba phambili ngabantu abampofu abaphila ngesondlo sikahulumeni.
UZuma uthe inkinga yesibalo esiphezulu sabantu abasha abangasebenzi akumele ithathwe kancane ngoba izofaka ikusasa lakuleli enkingeni.
Uthinte nodaba lwentsha esifundile kodwa engaqasheki wathi lokhu kuyinkinga okungafanele ibukelwe kude ngoba iqiniso ukuthi izinkampani aziyingeni indaba yomuntu ongakaze asebenze ndawo .
Ubesho lokhu ebala nokuthi kunezinkulungwane zabantu abasha abaphothula imfundo ephakeme minyaka yonke abanye abasuke bethole nemifundaze kuhulumeni kodwa izinkampani ezingafuni ukubaqasha ngoba zithi abakaze basebenze ndawo.
Uphinde wakhala ngobuvila nangabantu abangenawo nhlobo amakhono emisebenzi wathi lokhu kunomthelela omkhulu wesibalo sabantu abangasebenzi nendlala.
IMeya yasoThungulu lapho okuqhubeka khona le ngqungquthela, uNkk Thembeka Mchunu, uveze ukuthi kulowa mkhandlu bangu-20% abantu abasha abangasebenzi.
Uthe ngenxa yalokhu sebezame ukuthi babe nezinhlelo ezibhekelele intsha ngamakhono ezemfundo ahlukene ukuze bakwazi ukubhekana nenkinga yabantu abangasebenzi nalabo asebegogodile kwezemfundo kodwa abangaqasheki.